IINKCUKACHA ZENKQUBELA | Iindaba zeGajethi
Inqaku elenziwe ngu ISenovilla, ukuba uyathanda ukutyelela ibhlog yakhe Iingcinga zeJFS
Ngeli xesha ndiza kukuxelela kancinci malunga IINKCUKACHA, zezona zoyikekayo kwi-Intanethi, ezona zinqweneleka kakhulu ngelishwa kubo bonke abo banokwenza owona monakalo mkhulu.
Kuya kufuneka uhlale uyikhumbula loo nto sonke sixhomekeke kwiinkqubo zombane neze khompyutha, silula ukuba ngamaxhoba alo naluphi na uhlaselo lwe-cyber. Masicinge ukuba uhlaselo olulula IiNethiwekhi yolwazi, inokuvelisa ilahleko kuzigidigidi kulo naliphi na iziko, inkampani okanye ilizwe, kunye neziphumo zengqondo.
Ubunqolobi bukhona kwilizwe lethu lokwenyani, kwaye ngayo yonke inkqubela phambili kwezobuchwephesha bekusengqiqweni ukuba kungekudala bazakusebenzisa imithombo yeendaba ebonakalayo ukwenza uhlaselo lwabo abanqolobi. Baqala ngokuthimba Izaphuli mthetho, Ukujonga utyelelo lwabo kwiintlobo ezithile zewebhusayithi, ukulandelela ukuthatha inxaxheba kweeforamu ezithile kwaye ukuba konke oku kuyabenza ukuba balandele iinjongo ezithile ezifanayo, bathinjelwa ukuba babe lilungu leqela labo labanqolobi.
Banxibelelana nabanye besebenzisa i UBUNGCALI, eyindlela evumela ukufihla iaudiyo, ividiyo, okubhaliweyo kunye neefayile zemizoboUkuzifihla kulondolozo oludumileyo lweCyberspies, kwaye zisetyenziswa kwii-imeyile, kwincoko, nakwiifowuni ezifihliweyo kunye neenkomfa zevidiyo.
Inkxaso-mali yabo yezoqoqosho bayifumana kunye ukuphanga iinkampani ezinkulu okanye amaqumrhu, ngezisongelo zokuhlaselwa okanye ukutyhilwa kweenkcukacha zabathengi okanye iimfihlo zeshishini, ngaloo ndlela kufunyanwa inkxaso-mali enomdla edla ngokufihlwa kwimibutho yesisa ukwenza imali, kokubini kulowo uyinikayo nakulowo uyifumanayo.
Zibhengezwa njani?, kuba bathabatha iiwebhusayithi ezahlukeneyo, ngakumbi ishishini ukupapasha uhlaselo lwabo, kwaye kwimizuzwana embalwa imiyalezo yabo yobunqolobi isasazeke kuwo wonke umhlaba.
Iinjongo zayo Baphazamisa amandla omkhosi kunye nenkonzo yoluntu yelizwe. Banokuqala ngokuhlaselwa kwiimarike zemali, ukuqhubeka nokuhlaselwa kweenkqubo zekhompyuter zikarhulumente.
Imowudi yakho yokusebenza iqala nge UQEQESHO onjongo yazo ikukufumana ulwazi kunye nezixhobo kumamkeli. Baqhubeka naye UKUQHUBA equka ukukhohlisa olo lwazi lufunyenweyo kodwa uvumele umamkeli ukuba asebenze. Kwaye iphela nge UKUTSHATYALALISWA, Kungoko xa beshiya umamkeli engasebenzi, etshabalalisa zonke iinkqubo zabo; nangona ngamanye amaxesha, oku kungasebenzi okwethutyana ukuthatha ithuba kwezixhobo.
Kukho imovie emnandi "Ihlathi le-4.0", apho ebalisa khona ukuba uhlaselo lwe-cyberterrorist lwenziwa njani kwaye wophula zonke iziseko zelizwe.
Umzekelo wentengiso esinayo nayo AL QAEDA , Esidibanisa ngobulumko ipropaganda yemultimedia kunye netekhnoloji ephezulu yonxibelelwano ukuze oku imfazwe yengqondo kubangele uloyiko kunye noloyiko kubemi belizwe.
Kufuneka siphawule ukuba amazwe aphuhlisa izixhobo eziza kukwazi Ukuhlasela iinkqubo zikarhulumente zamanye amazwe, kodwa kwangaxeshanye kufuneka bayazi indlela yokuzikhusela kuhlaselo, hayi kwelinye ilizwe kuphela kodwa nakwiiCyberterrorists.
Kungenxa yoko le nto kuvela olunye uhlobo lweCyber, i Amagorha eCyber ziinjineli ezinee-arsenals zekhompyuter, kwaye bajongene nokulwa Abahlali beCyber kwinqanaba elibonakalayo kunye netekhnoloji ephezulu.
Sibonile umzekelo wolu hlaselo e-Estonia, ngo-Epreli 27, 2.007, amaphepha aseburhulumenteni karhulumente kunye neqela elilawulayo lakhubazeka, iinkqubo zeebhanki kunye namaphephandaba zazingasebenzi kangangeeyure, kwaye konke oku emva kokuba iRussia ibeke uxinzelelo e-Estonia esidlangalaleni.
Ngenxa yako konke oku ndikuxelela kona, akukho mathandabuzo ukuba sikwi IMFAZWE YENGCOLI EBANDAYO, apho abalinganiswa abaphambili ngoku bangokoqobo: iintlola ze-cyber, amajoni e-cyber, abagrogrisi be-cyber… Inkokeli yiCHINA, ejongene nohlaselo lwabanqolobi aba-4 kwaba-5.
Umlo oqinisekileyo uyingozi, apho onke amalungelo asisiseko elahlekileyo kunye neenkqubo ezinje nge UCARNIVORE, abanokuthi ngayo bafunde i-hard disk yakhe nawuphi na umsebenzisi okanye IWEBHU EMNYAMA, Esebenzisa izigcawu kwikhonkco kunye nohlalutyo lomxholo. Izixhobo ezinje nge UKUBHALA ekhupha amawaka eempawu zobuninzi beelwimi ezininzi, ezakhiweyo kunye nezisemantic ukufumana okungaziwa kwi-Intanethi.
Kwaye ngayo yonke le nto asinakwenza okungaphezulu, kwaye awona mazwe aphuhlileyo angenza izixhobo ezitsha ezingagqithiswanga ngabaphuli-mthetho, yiyo loo nto kungekudala siza kubona ukuzalwa kwe-INTERNET 2, apho Amazwe aya kulawula iNethiwekhi, kodwa lelinye ibali lelinye i-POST.
Inqaku elenziwe ngu ISenovilla, ukuba uyithandile ndwendwela ibhlog yakhe Iingcinga zeJFS
PD: Unokusebenzisana neVinagre Asesino
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » IINKCUKACHA
Usandula ukubhukishwa yi-FBI, into embi kukuba nam. :).
Abambalwa beeCyberterrorists bazama ukwenza ukuba siqwalasele. :)
Siza kubona icala elililo kwaye oko kukuthi siya kubala njengotyelelo :).
Kube luvuyo ukwenza le CIBERS triology kwiBhlog yakho.
Ulawulo olupheleleyo lomxholo.
Uyazi njani ubuhle obungaka? Ngaba inokuba yimpembelelo kaFernando Rueda?
Iviniga, ubethe lo mdibanisi ubalaseleyo.
USergio Salazar sitsho
Eli nqaku landishiya ndimangalisiwe, ngaba i-Intanethi 2 isisombululo? Ukuba thina madoda asikwazi ukulawula inkululeko yethu, ngaba kunjalo ngeBig Brother?
Phendula uSergio Salazar
Inomdla kakhulu, nangona kunjalo ndicinga ukuba ubugqwetha be-cyber bugcwele ngaphezulu kobugqwetha, kuba abantu abazinikezela kuyo "NGOKUQALA", kwaye baqeshwe ngoorhulumente okanye nkqu nakumazwe amaninzi ukuba babambe ulwazi kunokuba babangele isiphithiphithi, iJungle 4.0 ilungile kakhulu iziphumo ezizodwa kodwa "ukhululeke" kakhulu
Ndithatha ithuba lokuba lijongana nesihloko esithi "imfazwe yengqondo ... uloyiko kunye noloyiko kubemi belizwe ..." ukucebisa uxwebhu, nangona lungahambelani nesihloko sesithuba, sinxulumene ekusetyenzisweni koluntu kunye nokusetyenziswa koyiko njengesixhobo sezopolitiko ukunqanda amalungelo kunye nemfihlo yabemi ...
Ibizwa ngokuba yiZeitgeist ngesiNgesi kwaye ibhalwe ngesiSpanish, yahlulwe yangamacandelo amathathu, ndikushiya ikhonkco kwiGooglevideo yeyokuqala, ezinye ezimbini zivela apho.
Unakho okanye awuvumelani nomxholo, kodwa kunika okuninzi onokucinga ngako.
Umrhumo olungileyo TROCOLO, ndinombhalo onomdla endiza kuwubukela.
Nangona kunjalo, kwinto yokuba awucingi ukuba zininzi I-CYBER-TERRORISTS, andivumelani nawe kakhulu, kuba yonke into yalatha ku-ewe kwaye bangaphezulu kunokuba besingathanda kwaye bahlala besebenzela urhulumente ( Apho batya khona irayisi eninzi) kwaye ewe ayingoba ndibuza amaNgesi.
Ifilimu eqinisekileyo yinyani emsulwa, kodwa isekwe kwinto eyathi yaziwa kwi-Intanethi njenge-CAOS.
Imibuliso kubo bonke kwaye ndiyabulela ngento endichukumisayo.
Ndiyathanda ukwandisa amanqaku ngeendaba ezinxulumene noko, kunye nemvume yeviniga, ndibeka enye esele ivele kumaphephandaba kule mihla, kwabo basenamathandabuzo malunga nolu hlobo lolwaphulo-mthetho:
I-LOS ANGELES (iUSA) .- UmMelika oneminyaka engama-26 ufunyenwe enetyala eLos Angeles 'ngokuqhekeza' "amakhulu amawaka eekhompyuter" eUnited States ukuba ebe ulwazi oluyimfihlo kwaye evezwe iminyaka engama-60 entolongweni, ngokomphathiswa wezemali.
UJuan Schiefer, umcebisi wezokhuseleko kwikhompyuter, uvumile phambi kwejaji "ngokuthatha ngokungekho mthethweni ulawulo lwamakhulu amawaka eekhompyuter eUnited States, awathi kamva wazilawula ngokude ngeeseva," ngaphandle kwabasebenzisi bakhe abazi, ngokweofisi yeofisi umtshutshisi womanyano.
"Nje ukuba ezi khomputha zilawulwe, uSchiefer wasebenzisa iinkqubo ezizenzekelayo- 'iibhotile' - ukukhangela iziphene kwezokhuseleko kwezinye iikhompyuter, thintela unxibelelwano lwe-elektroniki kwaye ube idatha yobuqu", ukuze ufumane inzuzo kwezoqoqosho.
U-Schiefer wafunyanwa enetyala lokuthintela unxibelelwano ngokungekho semthethweni, kunye nobuqhetseba bebhanki kunye nokuhanjiswa kweengcingo.
Umtshutshisi woluntu uqinisekisile ukuba ummangalelwa, owalivumayo ityala lakhe kwaye angagwetywa ngqo, "ngumntu wokuqala e-United States ukuvuma ityala lokufumana idatha kusetyenziswa 'iibhotile'."
UJuan Schiefer, owaziwayo kuluntu 'lwabaduni' ngegama lesidlaliso elithi 'acidstorm', uyasazi isigwebo ngo-Agasti 20. Ukongeza kwiminyaka engama-60 entolongweni, kuya kufuneka uhlawule isohlwayo se- $ 1,75 yezigidi.
Kulungile zithandwa zam zenethiwekhi, olu hlobo lolwaphulo-mthetho lwazalwa nge-intanethi, njengoko amapolisa esizwe aseFrance azalwa kwaye abunjwa okokuqala kwizaphuli mthetho.
Kodwa njengabaphuli-mthetho be-cyber, bayazenza izinto ezimbi, kwaye siyayazi indlela abenza ngayo, ekugqibeleni, uthungelwano lwabaphandi bamapolisa luyawa, kungekudala okanye kamva.
Kule mdlalo, umthetho uhlala uphumelela, nangona ngamanye amaxesha ukulibaziseka kancinci sikule nto ukuze oku kulibaziseka kunqunyulwe, kwaye bayamiswa, ngendlela entle, elula, neklasikhi, okanye hayi.
Lumka okwenziwa lulutsha kuFacebook
Incwadi yeAres. Ukufakwa kunye noqwalaselo lweAres 2.0.9